Union Minister U Kyaw Tin receives Korea-Myanmar Inter-Parliamentary Friendship Association Chairman – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin receives Korea-Myanmar Inter-Parliamentary Friendship Association Chairman
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation received H.E. Mr. Kim Jaewon, Chairman of the Korea-Myanmar Inter-Parliamentary Friendship Association on 21st February 2019 at 1pm at the Ministry of International Cooperation, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially discussed and exchanged views on matters pertaining to the enhancement of bilateral relations and Inter-Parliamentary relations and cooperation, agricultural program under Saemaul Undong project, construction project on Myanmar-Korea Friendship Bridge (Yangon-Dala), holding of the 30th Anniversary of ASEAN-Korea Commemorative Summit, provision of Official Development Assistance (ODA) by Korean governmentand promoting potential areas of cooperation between the two countries.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုရီးယား-မြန်မာ လွှတ်တော်များအကြား ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ကိုရီးယား-မြန်မာ လွှတ်တော်များအကြား ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Kim Jaewon အား ၂၁-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၃၀ဝ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်များအကြား ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ စံပြကျေးရွာ လှုပ်ရှားမှု (Saemaul Undong) စီမံကိန်း အောက်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်ကိစ္စ၊ မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး (ရန်ကုန်-ဒလ) တံတား တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကိစ္စ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှစ် (၃၀) ပြည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်ကိစ္စ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ (ODA) ပေးအပ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်မည့် အလားအလာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။